Rooble oo soo celiyay dhaqankii Kheyre, Fahad iyo Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo soo celiyay dhaqankii Kheyre, Fahad iyo Farmaajo
Farmaajo iyo Rooble, ayaa soo abaabulay qorshe lagu daminayo hadal heynta ka dhaatay boobkii doorashadii shalay ka dhacay xarunta ciidanka cirka ee Afisyooni.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dib u soo nooleeyay dhaqankii Khayre, Fahad iyo Farmaajo caanka ku ahaayeen ee haa (dhacdo, dhacdo kale ku aamusi.)
Si loo damiyo buuq ka dhashay boobkii ay Madaxdooyada oo uu wakiil ka yahay Rooble, kula kacday doorashada guddoonka Guddiga maamulya doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi, ayuu Farmaajo soo saaray war saxaafadeed uu ugu yeeray Wareegto Madaxweyne.
Warka ka soo baxay Xaafiiska Farmaajo, waxaa lagu soo aadiyay xilli la filayo in ay saacado kadib, Muqdisho soo gaarto Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Raychelle Omamo, oo casuumaad ka heshay dhigeeda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq.
Warka waxaa loo ekeysiiyay mid RW Rooble, ku socda, lana xariira safarka waftiga Kenya, waxaana aad loogu dadaalay in bulshada loo soo bandhigo inuu jiro khilaaf hoose oo ka dhex aloosan, Xilkiis-dhamaadaha iyo, Xil-gaarsiiyaha, (Farmaajo & Rooble) hayeeshee, ujeedka ayaa qodobkaas ka gaddisan.
Dhacdo kasta oo dalka ka dhacday intii ay talada hayeen Kooxda Farmaajo, waxa ay ku daminayeen dhacdo kale oo ka weyn, si loo hilmaamo middii hore, ujeedka waraaqda ka soo baxday Farmaajo, waa in laga gudbo boobkii doorasho ee shalay ka dhacay Teendhada Afisyooni, lana damiyo buuq ka dhashay baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida.
Ujeedka kale, ee waraaqdu leedahay, waa olole siyaasadeed oo Farmaajo loo sameynayo, saacado ka hor inta aysan wraaqdu soo bixin waxaa aad loo hadal hayay socdaalka Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Raychelle Omamo, Kooxda baraha bulshada u qaabilsan Madaxtooyada ayaana si weyn u hadal hayay kiiska badda iyo arrimo ganacsi.
Farmaajo oo iska dhigaya inuu difaacayo xoolaha dadweynaha ayaa soo saaray war saxaafadeedka, wuxuuse hilmaamay in uusan wareegto madaxweyne soo saari karin oo muddo xileedkiisi dhamaaday lix bilood ka hor, isla-markaana uusan Rooble, heshiisyo masiiri ah gali karin oo kaliya uu xil-gaarsiiye yahay.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen ilo kala duwan oo ku dhow labada Xaafiis, u jeedka waraaqdu wuxuu ahaa mid la isla ogaa, si looga gudbo buuqa ka dhashay doorashadii la bobay isla-markaana olole loogu sameeyo Farmaajo.
Dhacdooyinka ay dhacdooyinka kale, ku aamusiyeen, waxaa ka mid ah:
Hadal heyntii Shacabkii lagu xasuuqay Barriire, si ay u damiyaaan waxa ay rayidki laayay ku sunteen Argagixiso.
Hadal heyntii ka dhalatay dhiibistii Qalbi Dhagax, waxa ay ku damiyeen "ONLF waa Argagixiso".
Shirqoolkii Madaxweynayaashii hore, waxa ay ku damiyeen weerarkii bannaanbixii mucaaradka.
Muddo kordhintii, waxa ay ku damiyeen raacdeyntii Saadaq Joon.
Askartii la waayay ee loo qaaday Waqooyiga Itoobiya, waxa damiyeen dilkii AUN, Cabdixakiin Dhagajuun.
Dhilkii dhagajuun waxa ay ku damiyeen, dilkii AUN Genaraal Galaal.
Tallaabada Rooble, waxa ay meesha ka saareysaa rajadii yareyd ee bulshada qaar qabeen, taas oo ahyd in uu dalka ka qaban doono doorasho uu dhexdhexaad ka yahay.